Ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariam-pahefana aty ifotony no fototra hisian’ny fampandrosoana | Région Boeny
Notontosaina tao amin’ny trano fivoriana eny amin’ny Bloc Administratif Ampisikina Mahajanga ny dinik’asa momba ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 2020 ny Alatsinainy 05 Aogositra 2019. Ny Tale Jeneraly avy ao amin’ny Minisitera ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana,RtoaHarimanana Simone synyChef de service de Synthèse Budgétaire avy ao amin’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola,Atoa Jerry no nitarika ny fivoriana. Nanotrona azy ireo ny Prefét, ny Lehiben’ny Faritra ary ireo Ben’ny tanàna sasan-tsasany ato anatin’ny faritanin’I Mahajanga.
Mba hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fanapariam-pahefana aty ifotony izay fototra hisian’ny fampandrosoana dia natao izao dinik’asa izao mba ho tena ny zavatra ilain’ny vahoaka aty ifotony sy ny hetahetan’ny mponina no ho voa rakitra ao anatin’ity teti-bola izay ho rafetina ity. Mba ho feno araka izany ny filan’ny mponina dia nantsoin ahanatrika ny dinik’asa ny solotenan’ny Parlemanta eto anivon’ny faritra Boeny, ny avy ao amin’ny faritra ,ny fiaraha monim-pirenena, ny sehatra tsy miankina sy ireo solotenam-panjakana aty an-toerana.
Nomena fanazavana tsotsotra momba ny lalàna tsy maintsy hizorana ahatongavana amin’ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana araka izany ireo rehetra izay tonga nanatrika ny fivoriana. Nampahatsiahivina azy ireo ihany koa ireo teboka maro maro tafiditra ao anatin’ny « grand défi de la décentralisation émergente ». Tao anatin’izany ny resaka lalàna, ny fanamafisana ny fahefana eny anivon’ny vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana ary ny fanavaozana ny fitaovana ahafahana manatontosa arakany tokony ho izy ny asa andrasan’ny vahoaka amin’ny fanjakana.
Aorian’ny fivoriana izay no tanterahana anio ary dia hisy ny fanagonana ireo hevitra avy amin’ireo sokajy na vondron’olona voatanisa tery ambony. Efa misy tari-dalana manokana (canevas) arahana moa hanatontosana izany hanafainganana ny asa.
Nahazo tombony ny Faritra Boeny nampandroso izao dinik’asa momba ny fandrafetana ity teti-bolam-panjakana 2020 satria afaka manomboka avy hatrany ny asa fanagonan-kevitra.
« Tsara fitontona izao dinik’asa izao hoy ny Lehiben’nyfaritra Boeny mpisolotoerana, Atoa Bazezy V. Clavelah manamafy izany satria efa manana ny drafi-paritra ho an’ny fampandrosoana (PRD) isika eto anivon’ny faritra Boeny ka ho tsoahina avy ao anatin’izany ny tolok’evitra izay hatsofoka ao anaty ny « canevas » ahafahana manatanteraka ny asa amin’ny taona 2020. Ho an’ireo faritra 3 sisa ato anatin’ny faritanin’ny Mahajanga (Melaky, Sofia, Betsiboka) izay tonga nanatrika ny fivoriana kosa dia fiofanana ihany no azon’izy ireo.
Ary mbola hanatontosa ny dinik’asa sahala amin’izao ireto farany rehefa tonga any amin’ny faritra misy azy ireo tsirairay avy.